FIANTSOANA FIVORIANA NY ANTSO - FPMA MELUN
FIANTSOANA FIVORIANA NY ANTSO
Post author:Lalasoaniaina Rabarisoa
Anio 14 septambra 2021
Faly miarahaba antsika amin’ny Anaran’ny Tompo,
Endrey tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina fa voadidin’i Jehovah ho eo ny Fitahiana, dia fiainana ho mandrakizay » Sal 133 : 1, 3b
Asaina isika mpikambana rehetra ato amin’ny Antoko mpihira NY ANTSO hivory ny alahady 26 septambra 2021 aorian’ny fotoam-pivavahana, hiara-midinika ny soritr’asan’ny Sampana. Ny toerana dia ao ambany rihan’ny Eglise adventiste – Dammarie-Lès-Lys.
Toy izao ny fandaharam-potoana amin’izany:
– Fiaraha-misakafo. Koa samy hivimibina sakafo sy zava-pisotro izay hifampizarantsika, fitaovana (sotro, vilia, vera) isika mpikambana;
– Fampianarana hataon’ny ray aman-dreny mpitandrina;
Afaka miaraka misakafo amintsika sy mihaino ny fampianarana ireo vady aman-janaka.
Zava-dehibe ho fampandrosoana ny Sampana no hodinihana, afahantsika manatanteraka ny asa napetraky ny Tompo amintsika. Koa miangavy ny Birao mba hanatrika ny fivoriana isika izay mbola mikasa hiara-midera ny Tompo ato amin’ny sampana Antoko mpihira Ny Antso.
Raha sanatria misy antony tsy afahana manatrika mivantana ny fivoriana, dia afaka miditra amin’ny lien zoom amin’ny 15H30:
 01.70.95.03 50
 ID de réunion : 355 389 3563#
Mitrotro am-bavaka ny fotoana isika.
Manonona ny Fiadanan’ny Tompo.
Ny Birao AMF NY ANTSO
TORITENY AN-KIRA NOELY NY 19 DESAMBRA 2021
Sary fahatsiarovana – Alahady 03 Oktobra 2021
Concert de Pâques 24/04/2022